Warbixin BBC-du diyaarisay “Maxay tahay danta ugu jirta Soomaaliya iyo Afrikaba Shir madaxeedka Shiinaha iyo Afrika? – Madal Furan
Hoy > Warka > Warbixin BBC-du diyaarisay “Maxay tahay danta ugu jirta Soomaaliya iyo Afrikaba Shir madaxeedka Shiinaha iyo Afrika?
Warbixin BBC-du diyaarisay “Maxay tahay danta ugu jirta Soomaaliya iyo Afrikaba Shir madaxeedka Shiinaha iyo Afrika?
Editor August 29, 2018 Warka 0
Madal Furan – Magaalada Beijing waxaa Jimcaha iyo Sabtida oo ah 3 & 4 Siteembar lagu qaban doonaa shir madaxeed sannad kasta ay isugu yimaadaan madaxda dalalka Afrika ee xiriirka diblomaasiyadeed la leh Shiinaha iyo waddanka Shiinaha oo kulankaas sannad kasta marti galinayey dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay.
Hore kulammadii u dhacay, wuxuu Shiinuhu mashaariic Balaayiin Doollar ku kacaya uga fuliyey meelo badan oo Afrika ah, kuwaasoo u badan dekedo, waddooyin, iyo khadadka tareennada, kuwaasoo Sahli kara in ganacsiga qaaradda uu fududaado.
Laakinse dadka arrimaha dhaqaalaha ka faallooda waxay qabaan in taasi ay ku hoos jirto in Shiinuhu uu doonayo in badeecadihiisa uu si fudud ku gaarsiiyo dadka qaaradda ku nool, oo weliba uu warshadihiina uga samaynayo dalalkooda, sida mashruuca aagga ganacsiga xorta ah ee Jabuuti.
Waxyaabaha sannadkan laga fili karo in lagu soo qaado kulankaas wax badan kama duwana sida kuwii sannadihii ka horreeyey.
Dr Shaafici Shariif Maxamed waa aqoonyahay ka faallooda arrimaha Aasiya iyo bariga fog, wuxuuna qabaa dhan marka laga eego inay faa’iido ugu jirto dalalka Afrika qodobbada la filayo in looga hadlo shirka.
“Ajendaha sannadkan waxaa ka mid ah dhismaha waddo dheer oo Afrika oo dhex marta, iyo warshado suurto galiya in dalalka Afrika ay wax soo saarkooda kor ugu qaadaan” ayuu yiri.
Qodob kale oo isna muhiimadiisa leh, laakinse aan lagu soo darin ajendaha shirka ayaa ah sida laga yeelayo deymaha uu Shiinuhu ku leeyahay Afrika, oo ay dhici karto in shirar barbar socda kulan-weynaha si gooni-gooni ah looga hadlo.
Arrintaas wuxuu Dr Shaafici aaminsan yahay in “shiinaha ay awood u siinayso inuu koontaroolo dalalka uu deynta ku leeyahay, oo aysan heshiis ganacsi oo kale geli karin”.
Sababta arrintaas keenaysa ayuu u aanaynayaa in “madaxda Afrika badankood aysan lahayn Istaraatijiyad qaran oo ay ku horumarinayaan dhaqaalaha dalalkooda, Halka Shiinuhu uu xoogga saarayo sidii uu Afrika u dhex gali lahaa.
Qorshe xummo mise degdeg?
Mashaariic meelo kala duwan oo Afrika ku yaalla uu shiinuhu ka fuliyey ayaa noqday kuwo is bixin waayey ama qarka u saaran in ay burburaan, maadaama ay soo celin waayeen lacagihii malaayiinta ahaa ee la galiyey.
Haddaba ma markii hore ayaan si fiican loo qorshaynin mashaariicdaas, mise waa lagu degdegay ayadoo aan laga fiirsan? Wa kan mar kale Dr Shaafici.
“Waxaan qaba in lagu degdegay oo waxyaabo ka muhiimsan ay ahayd in laga hormariyo, waxaa ka mid ah garoommo badan oo kubadeed oo laga dhisay koofur Afrika xilligii koobka adduunka, iyo khadka tereenka ee isku xira Nairobi iyo Mombasa. Shiinuhu wuxuu danaynayaa in uu helo waddooyin uu badeecadihiisa ku gaarsiiyo suuqyada Afrika. Maadaama awoodda wax iibsiga ee dadka Afrika ay aad u yar tahay, in la dhiso waddo weyn oo tareen oo kharash badan uu ku baxayo, hadafkii laga lahaa lama gaarayo, waayo madaxda Afrika ma oga awoodda wax iibsiga ee dadkooda, taasina waxay keeni kartaa in waddooyinka iyo khadadka tareennada ee la dhisay ay guul darraystaan”.
Maxaa dan ah oo ugu jira Soomaliya in ay shirka ka qayb gasho?
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u amba baxay dalka Shiinaha si ay shirka uga qayb galaan.
Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, ka hor shirka madaxda Afrika iyo Shiinaha dhex mari doona, wuxuu Farmaajo “kulan gaar ah la qaadan doonaa dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping”, waxaana uu qoraalku intaa ku daray in labada mas’uul ay isla soo qaadi doonaan “dardar-gelinta xiriirka taariikhiga ah ee Shiinaha iyo Soomaaliya, kaas oo ku saleysan iskaashi iyo wax wada qabsi, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, diblumaasiyadda iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha”.
Si gaar ah looma cayimin qorshaha wafdiga Soomaaliya uu la tagayo shirka iyo noocyada mashaariicdaas.
Haddaba, Soomaaliya oo ku dhawaad soddonkii sano ee u dambeeyey aysan ka socon mashaariic uu Shiinuhu fulinayey, maxay tahay danta ugu jirta ka qayb galka Shirkan?
Dr Shaafici wuxuu qabaa in muhiim ay u tahay “hadii uu Shiinuhu ka kaalmaynayo dib u soo noolaynta mashriicdii uu 1990 ka hor Soomaaliya ka fuliyey, sida garoonka Istaadiyo Muqdisho, Tiyaatarka iyo isbitaal Banaadir”,
Wuxuu kaloo Dr Shaafici qabaa in Shiinaha lagala hadlo “arrimaha beeraha iyo jidadka oo aad u burbursan”
Danaha Dalalka shisheeye ee Soomaaliya
Qodobkan ayaa sida uu qabo Dr Shaafici Shariif Maxamed wuxuu keeni karaa in heshiisyo waaweyn uusan madaxweynaha la soo gelin dalka Shiinaha, gaar ahaan marka la fiiriyo galaangalka Turkiga iyo Maraykanka oo labadaba xiriirkooda uusan fiicnayn ay ku leeyihiin Soomaaliya.
“Uma malaynayo in madaxweynaha uu wax badan oo heshiis ah la soo geli doono Shiinaha, iyadoo la fiirinayo xiriirka Turkiga kala dhaxeeya. Maraykanka oo Arrimaha Afrika aad u danaynaya wuxuu Soomaaliya ku leeyahay saamayn aad u badan. Sidaa darteed, waxaa dhici karta in Soomaaliya lagu cadaadiyo in xiriir sidaas u sii badan aysan la soo saxiixan Shiinaha” ayuu yiri Dr Shaafici.
Shiinuhu wuxuu 2006 Afrika ka hirgaliyey mashaariic ku kacay 5 Bilyan oo Doollar, 2015-na wuxuu ku bixiyey 60 Bilyan oo Doollar.
Gunaanadka kulankan waxaa la filayaa in yabooh dhaqaale oo isugu jira deeq iyo deyn uu u ballanqaado qaaradda, iyo mashaariic hor leh, waxaana intaas dheer isagoo sannad walba kumanaan arday oo ka socda dalalka qaaradda siiya deeqo waxbarasho.
Wararkii ugu dambeeyay duqeyn ka dhacday Mudug
Qalab ay ku loollamaan dalalka ugu awoodda badan caalamka balse si sahlan loogu iibiyo Suuqyada
Diyaarado siday meydka iyo dhaawaca ciidamada Amisom oo Muqdisho soo gaaray